"Gazelle अर्को" अपेक्षाकृत हालै रूसी बजार मा देखा पर्नुभयो। र "Gazelle" को अघिल्लो पुस्ता फरक घृणित गुणस्तर रंग हो भने, "अर्को" संग कार, स्थिति धेरै राम्रो छ। निर्माता तामचीनी लागू को प्रविधि परिवर्तन भएको छ। र अब "Gazelle अर्को" repainting मात्र एक दुर्घटना को मामला मा वा मालिकको विकल्प आवश्यक छ (अचानक सबै रंग मन थिएन)। अहिले यो सेवा विभिन्न कार्यशालाओं छन्। तथापि, "Gazelle अर्को" painting लागत कहिलेकाहीं एक सय हजार आउँछ। आजको लेखमा हामी आफ्नै हातले यो प्रक्रिया पूरा गर्न कसरी छलफल हुनेछ।
त्यहाँ एक स्थानीय चित्रकला हो भने, तपाईं तामचीनी को नियमित गर्न सक्छन् इच्छित छाया खरिद गर्न सक्नुहुन्छ (यो कारखाना कोड मेल महत्त्वपूर्ण छ)। तर, पूर्ण recoat को मामला मा थप राम्ररी तयार गर्नुपर्छ। सबै को पहिलो, हामी स्प्रे गर्न, खुम्च्याउने र लिटर छैन कम पाँच भन्दा को रिसीभर आवश्यक छ। हामी पनि आपूर्ति खरिद गर्न आवश्यक छ। यो तामचीनी नै, एक hardener, एक विलायक, स्यान्डपेपर तेल कपडा, टेप masking, कैंची। Caulking मात्र आवश्यक प्राप्त छ।
जतिसुकै राम्रो कोठा नयाँ तामचीनी sharkskin को उपलब्धता निर्भर हुनेछ तयार पारे। चित्रकला (पनि स्थानीय) घर भित्रका बाहिर गर्नुपर्छ। सारा शरीर उपचार गरिएको छ भने, यो बक्समा एक स्थिर तापमान सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो कुनै कम भन्दा 20 डिग्री सेल्सियस हुन कि मनमोहक छ। काम हिउँदमा गरेको छ भने, यो ठाउँ ताप प्रदान गर्न अनिवार्य हुनुपर्छ। यो प्रेरणा हीटर को माध्यम द्वारा गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले पर्खाल मा समान रूप राखिनेछ। बस रंग रूपमा सीधा सकेसम्म बाहिर सूखी हुनेछ किनभने। कुनै मामला मा सडक वा यार्ड मा कुनै काम गर्छ। को slightest धूलो सतह मा स्पष्ट देखिने हुनेछ।
हामी तामचीनी नम्बर सिक्न
के रंग रंग "Gazelle अर्को"? यो जानकारी सबैलाई मास्टर सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। रंग कोड "Gazelle अर्को" को दर्जा थाली, को चालक पक्ष ढोका किनारा मा स्थित छ जो मा स्थित छ। त्यहाँ टायर को विशेषताहरु र आफ्नो सिफारिस दबाव मा डाटा पनि छन्। कोड नै शाब्दिक मान समावेश गर्दछ र चार वर्ण मिलेर बनेको छ। पहिलो तीन - यो सिर्फ एक कोठा रंग गर्नुपर्छ। "Gazelle अर्को" खैरो EWPA नामित छ। पछिल्लो पत्र - तामचीनी विशेषताहरु। यसलाई निम्न प्रकार को हुन सक्छ:
एक - अपारदर्शी, वार्निश बिना।
बी - एउटै छ, तर एक लाह समाप्तिको साथ।
सी - Metallized तामचीनी।
डी - nacreous रंग lacquered।
कसरी तामचीनी को धेरै लिटर काम गर्न आवश्यक छ? यदि सञ्चालनको मात्रा - ट्रक ट्याक्सी सम्पूर्ण, तपाईं रंग को2लिटर र एउटै hardener खरीद गर्नुपर्छ। श्रृंखला देखि minibuses लागि "अर्को" तपाईं2पटक थप सामाग्री आवश्यक छ।
सबै सामाग्री खरीद पछि राम्ररी शरीर साफ गर्नुपर्छ। यो डामर दाग सहित सतह सबै माटो हटाउन आवश्यक छ। गुप्तमा ठाउँमा विशेष ध्यान। ढोका र भाग किनाराको यस गुहा। को तामचीनी सतह मा फोहोर हुन्छ भने, पहिलो धुने पछि यो छील हुनेछ। भारी दूषण सेतो आत्माको हटाइयो।
अर्को, कमजोरीहरू लागि शरीर जाँच गर्नुहोस्। यो हुन सक्छ:
उत्तरार्द्ध मामला मा, स्यान्डपेपर बाहेक, जस्ता कनवर्टर प्रयोग गर्नुहोस्। धातु उत्पादन कमजोरीहरू stripping। सफा सतह सुनिश्चित गर्न मात्र तरिका हो। यो अक्सर धातु र रंग को आधार कोट बीच लुकाउँदै धेरै वर्ष को लागि जंग छ। सफाई पछि, यो तुरुन्तै देख्न सकिन्छ। ठूलो-मात्रा संक्रमण जोगिन प्रयास गर्नुहोस्। सतह रूपमा चिल्लो हुनुपर्छ।
यस चित्रकला "Gazelle अर्को" को दुर्घटना पछि प्रदर्शन गरिएको छ भने, यो सबै धक्का र निशाना हटाउन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं पुटीन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो hardener एक टिन मा आउँछ। पछिल्लो अन्यथा प्लास्टर तत्काल dries, निर्देशन अनुसार संरचना संग मिश्रित गर्नुपर्छ। तपाईं सबै hardener प्रयोग गर्छन् भने, सुक्खामा त्यसपछि तह धेरै लामो समय हुनेछ - एक दिन भन्दा अधिक। तर आवश्यक मर्मतको समयमा 3-5 पातलो तहहरू कम्तिमा राख्न। यसरी मात्र सतह रूपमा आदर्श गर्न सकेसम्म नजिक हुनेछ।
एक hardener संग मिश्रण पछि, तपाईं चाँडै प्रयास गर्नुपर्छ, तर धीरे संरचना मा एक दाग राखे।5मिनेट पछि, फिलर यस्तो ग्रेनाइट रूपमा ठोस छ। अतिरिक्त schesyvaem पट्टी तह, स्यान्डपेपर मा enveloped। यो प्रक्रिया सतह चिल्लो नभएसम्म, तब सम्म धेरै पटक दोहोर्याउन।
यदि यो खुला धातु छ, यो चित्रकला अघि primed गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि जमीन ध्यान मात्र खुला सतह ह्यान्डल। कुनै मामला छैन तामचीनी मा राख्नु गर्छन् मा - यो बस सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो छैन। धातु गर्न रंग को राम्रो आसंजन लागि प्रयोग प्राइमर। यो केवल एक तह मा लागू गरिएको छ। अब, सतह ध्यान तयार गर्दा, "Gazelle अर्को" रंग गर्न लिइएको छ, एक hardener संग पतला छ र एक स्प्रे बोतल भर्न छ। अर्को चाहेको स्प्रे कोण चयन (पहिलो फराकिलोकालागि टर्च)। सुरुमा मात्र आवश्यक भएको तामचीनी सतह लागू गर्न। त्यसैले हामी अनावश्यक drips निर्मूल गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो तह मोटा हुनेछ। प्रक्रिया धेरै पटक, आवधिक Refilling तामचीनी स्प्रे बन्दूक बारम्बार गर्नुपर्छ। र यति लामो शरीर रूपमा एक वर्दी रंग प्राप्त हुनेछ। वैकल्पिक, एक स्पष्ट लाह को एक पत्र लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को 3-5 दिनको लागि एउटै कोठामा "Gazelle अर्को" painting पछि हुनुपर्छ। मात्र सुकाएपछि, तपाईं सञ्चालन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एक महिनाको लागि उच्च-दबाव वाशर - contraindicated छ।
एक ट्रक कसरी चयन गर्ने?
रूसी सडक मा Man TGA
GAZ-एएए: इतिहास, वर्णन, विनिर्देशों,
कागज polyhedron कसरी बनाउने। पोलिहेड्रा Name कागज - योजना
अवलोकन ग्याँस-2424: सुविधाहरू, विनिर्देशों र समीक्षा
लिप प्राइमर: उत्पादन, लोकप्रिय ब्रान्ड विशेषताहरु
मसालेदार Aspen - जाडो लागि तयारी
आफ्नै हात संग वाशिंग मिसिन "ZANUSSI" गर्न मरम्मत। यो लुगा धुने मेसिन ZANUSSI मर्मत गर्न प्रयास
औषधि Dispensary उत्तर-पूर्व - एक तरिका समस्या को छुटकारा प्राप्त गर्न
काजल "Chanel", यसको भेरिएसनहरूमा र गुण